Mohamed Salah oo dhaawac looga saaray garoonka kulanka kooxdiisa Liverpool ay iminka la ciyaareyso Newcastle United… + SAWIRRO – Gool FM
Mohamed Salah oo dhaawac looga saaray garoonka kulanka kooxdiisa Liverpool ay iminka la ciyaareyso Newcastle United… + SAWIRRO
Haaruun May 4, 2019
(Newcastle) 04 Maajo 2019. Weeraryahanka kooxda Liverpool ee Mohamed Salaah ayaa dhaawac looga saaray qeybta labaad ee kulanka ay la ciyaarayaan naadiga Newcastle United ee Premier League.
Mohamed Salah ayaa dhaawac madaxa uu ka soo gaaray kaddib markii ay isku dhaceen goolhayaha Newcastle, waxaana dhaawacaan uu sababay in garoonka laga saaro.
Daqiiqaddii 73’aad ee kulankan u dhexeeya Newcastle iyo Liverpool ayaa xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah garoonka laga dhex qaaday, waxaana bedelkiisa soo galay Divock Origi.
Waxa uu ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha gooldhalinta horyaalka Premier League Salah, balse iminka waxa uu cidleeyey kooxdiisa Reds oo aad ugu baahan maadaama ay tartan adag oo dhanka hanashada horyaalka ah kula jirto kooxda Manchester City.
Inkastoo aan la shaacin xilliga uu garoomada ka maqnaanayo Mohamed Salah, haddana laacibka reer Masar ayaa laga yaabaa inuu soo dhammaaday xilli ciyaareedkiisii oo uu garoomada seego kulammada u harsan kooxdiisa Liverpool xilli ciyaareedkan.
Kulankan ka tirsan horyaalka Premier League ee u dhexeeya kooxaha Newcastle iyo Liverpool ayaa dhammaad ku dhow waxaana uu marayaa 3-2 oo ay ku hoggaaminayso Reds, iyadoo mid ka mid ah goolashaas uu dhaliyey Mohamed Salah.
Wixii warar ah oo ku soo kordha xaaladda Mohamed Salah dib ayaad kala socon doontaan hadduu Eebbe idmo.